Aluyi ndawo uhlelo lukaZodwa osolwa ngokucwasa
UZODWA Wabantu uyaxolisa ngenkulumo yakhe yabobulili obufanayo. Isithombe: Instagram
PHUMELELE NXUMALO | July 11, 2019
ISITESHI sethelevishini esizakhela igama ngesivinini kuleli, iMoja Love sithi ngeke luvalwe uhlelo lukanontandakubukwa wakuleli uZodwa Wabantu isiqephu salo sakamuva esisuse ukukhuluma kubabukeli kuleli sonto.
Esiqeshini sakamuva kwiZodwa Wabantu, Uncensored, uZodwa uzidonsele amanzi ngomsele ezwakala echomela abesilisa abathandana nabobulili obubodwa ethi basile kodwa bayakhohlwa ukuthi abanayo inanazi. Lokhu kuholele ekutheni kube nezikhalo kwaze kwaqalwa ipetition yokuthi luvalwe uhlelo lwakhe ezinkundleni zokuxhumana.
Esitatimendeni esishicilelwe ngoLwesine, iMoja Love ithe uZodwa uyazisola ngakusho ngabathandana nabobulili obubodwa futhi bazoqinisekisa ukuthi inkulumo ecwasayo iyagwemeka ezinhlelweni ezizayo.
"Siyazisola ngokushiwo uZodwa futhi naye usezibophezele ukuthi uzofunda. Njengabashicileli bohlelo siyazisola ngokwenzekile okube yiphutha futhi siyazibophezela ekukhiqizeni izinhlelo ezihloniphekile futhi ezibahloniphayo ababukeli," kusho isitatimende seMoja Love.
AbeMoja Love baqhube baveza ukuthi bazosebenzisana nezinhlangano zabathandana nabobulili obubodwa ukufundisa abasebenzi babo ngezinto ezibathintayo.
Ekhuluma emsakazweni iJozi FM ngoLwesithathu ntambama, uZodwa uveze ukuthi uhlelo lwakhe ngeke luvalwe ngoba ubesevele eqalile ukuxoxisana neMoja Love ngokulungisa lolu daba.
"Ngiyaxolisa ngendlela inkulumo yami ephume ngayo. Yindlela le engikhuluma ngayo nabangani bami," kusho uZodwa.
Noma kunenqwaba ekhalile ngenkulumo kaZodwa, abanye abalandeli bakhe bathe abayiboni icwasa inkulumo yakhe kangangokuba abanye baqale ipetition yabo yokuthi lugcinwe uhlelo lukaZodwa.
Noma iMoja Love imufake uswazi oluncane uZodwa, abanye ababukeli bafake izikhalo zabo kwiBroadcasting Complaints Commission of South Africa (BCCSA) okulindeleke ukuthi inqumo kulolu daba.